Health – Online BBC
Jun172018 by OnlineBBCNo Comments
सेक्स गर्ने चाहना छ ? दबाएर नराख्नुहोस, निम्तिन सक्छन् यस्ता रोग
यौन प्राकृतिक कुरा हो साथै शारीरिक आवश्यक्ता पनि । यौन त्यसबेला मात्र छाडा हुन्छ, जब यसको सीमा र परिधीको ख्याल गरिदैन । हरेक कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ । जब त्यो सीमारेखाभन्दा बाहिर पुग्छौं, त्यो स्वभाविक मानिदैन । खासमा बर्बतापूर्ण यौन सम्बन्धलाई छाडा भन्न सकिन्छ । अपराध भन्न सकिन्छ । यौन आशक्ति हुनु राम्रो होइन । यौन कुष्ठाले पनि अनेक बिकार निम्त्याउँछ । यौन सम्पर्कका फाइदा पति-पत्नी भएपछि स्वभाविक रुपमा यौन सम्पर्क स्थापित हुन्छ । यौन सम्पर्क शारीरिक आवश्यक्ता हो । यौन सम्पर्क गर्नु जति फाइदाजनक छ, नगर्नु उत्तिनै हानिकारक पनि । यदि तपाईं यौन सम्पर्क गर्नुलाई ‘नराम्रो’ ठान्नुहुन्छ र सकेसम्म यसबाट पन्छिनु हुन्छ भने, तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यसँग खेलबाढ गरिरहनुभएको छ । हुनसक्छ,तपाईको स्पर्म क्वालिटी कम हुनसक्छ र क्यान्सर हुने खतरा पनि बढ्न सक्छ । भनिन्छ, यौन सम्पर्कलाई पहरेज गर्दा
सुत्नुअघि फलफूल खानुका फाइदै फाइदा
रातको समय अचानक भोक लागेमा के खाने गर्नुभएको छ ? यस्तो वेला भोक मेटाउन तपाईंले चकलेट वा स्न्याक्सको सहारा लिइरहनुभएको छ भने गलत गर्नुभएको छ । किनकि, रातको समय अत्यधिक सुगर र क्यालोरीयुक्त स्न्याक्स प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा खराब असर पर्न सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि यस्तो समयमा फलफूल प्रयोग गर्दा निकै लाभदायक हुन्छ । तपाईंले डिनर गरेको केही समयपछि हरेक दिन फलफूल प्रयोग गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । कुन फल खाने ? सुत्नुअघि केरा, स्याउ, नासपातीलगायतका फाइबरयुक्त फलफूल खान सक्नुहुन्छ । तर, आयुर्वेदका अनुसार खाना खाएको केही समयपछि मात्र फलफूलको प्रयोग गर्नु स्वस्थकर हुन्छ । खाना र फलफूल एकैपटक प्रयोग गर्दा पचाउन समस्या हुन्छ । खानामा प्रोटिन र फाइबरको मात्रा हुने भएकाले पच्नका लागि समय लाग्छ । खानासँगै फलफूलको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले खाना र फलफूल
मुख गनाउँछ ? यसो गर्नुहोस्
सुकमेललाई मुख गनाउने औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । खाना खाइसकेपछि एउटा गेडा सुकमेल मुखमा च्याप्ने बानीले मुख गनाउने समस्याबाट बिस्तारै मुक्ति पाउन सकिन्छ । खाना खाइसकेपछि धनियाँको पात चपाउने बानीले पनि यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । धनियाँले सासलाई फ्रेस बनाउनुका साथै दुर्गन्ध हटाउने काम गर्छ । ल्वाङलाई सर्दी भगाउने उपायका रूपमा धेरैले लिने गर्छन् । तर, यसको प्रयोगले सासलाई स्वच्छ र सुगन्धित पार्न पनि मद्दत गर्दछ । प्राकृतिक रूपमा सास गनाउने समस्याबाट टाढा रहन पुदिनाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुदिनाको पातलाई प्राकृतिक माउथ फ्रेसनरको रूपमै लिने गरिन्छ । तर, यसको नियमित प्रयोग आवश्यक छ । नयाँ पत्रिकाबाट Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+सुकमेललाई मुख गनाउने औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । खाना खाइसकेपछि एउटा गेडा सुकमेल मुखमा च्याप्ने बानीले
दूध कसले खाने कसले नखाने ?
दूधलाई प्राचीन खाद्यपदार्थका रूपमा लिइन्छ । यो निकै पोसिलो खाद्यपदार्थ हो । जुन कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ । यसबाट प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन, क्यलोरिज र फ्याट पाइन्छ । यसका कैयौँ फाइदा हुँदाहुँदै पनि स्वस्थ मान्छेले भने दूधको प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने दूधका पनि केही बेफाइदा छन् : कसले खाने ? बढ्दो उमेरका बालबालिकाका लागि दूध अनिवार्य खाद्यपदार्थ हो । त्यस्ता बालबालिकाका लागि न्युट्रेसनको आवश्यकता हुने भएकाले दूध निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुपोषणको सिकार भएका व्यक्तिले पनि दूध खानुपर्छ । कतिपयलाई थोरै खएर धेरै क्यालोरी चाहिने हुन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिका लागि पनि दूध निकै राम्रो हुन्छ । किनभने दूधमा अत्यधिक क्यालोरीको मात्रा हुन्छ । कसले नखाने ? स्वस्थ मानिस अर्थात् हेल्दी एडल्टले भने दूध नखाँदा राम्रो हुन्छ । आफैँमा स्वस्थ व्यक्तिले दूधको प्रयोग गर्दा ओभर न्युटे«सनको
युवा युवतीहरुलाई ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्न अपनाइएको अनौठो तरिका
हरेकजसो विद्यालय र कलेजले छात्रछात्रालाई दुव्यर्सनबाट टाढा राख्न मेडिटेसन, व्यायाम र खानपानमा सुधार गर्न थालेका छन् । अमेरिकाको वरमन्ट यूनिभर्सिटी (यूभीएम) मा नशामुक्त होस्टेलको व्यवस्था छ । यूभीएमको उक्त होस्टेलको नाम वेलनेस इन्भारोमेन्ट राखिएको छ । जहाँ बस्ने छात्रछात्रालाई उसको स्वास्थ्यका लागि के राम्रो के नराम्रो हो भन्ने शिक्षा दिइन्छ । यसबाहेक उसको फिटनेस कोच र जिमको लागि निःशुल्क सदस्यता जस्ता सुविधा दिएर स्वस्थ रहन प्रेरित गरिन्छ । वेलनेस इन्भारोमेन्टका संस्थापक डा. जिमले होस्टेलमा छात्रछात्रालाई स्वस्थ खानपानको विकल्प दिँदा सहजै अपनाउने गरेको बताए । उक्त यूनिभर्सिटीमा नशामुक्त वातावरण बाहेक अन्य प्रयास पनि गरिएको छ । ‘हेल्दी ब्रेन, हेल्दीबडी’ नामक अडिटोरियममा छात्रछात्रा मेडिटेसन गर्छन् । डा. जिमले छात्रछात्रासँग न्यूरोसाइन्सका बारेमा पनि कुराकानी गर्ने गर्छन्, जुन शारीरिक र म
के मोबाइल फोनको रेडियसनले ट्युमर हुने खतरा हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ?
हामीले बोक्ने मोबाइल फोनका गुणबारे धेरैलाई जानकारी छ । तर, यसबाट निस्किने रेडियसनले कति नोक्सान गर्छ ? के मोबाइल फोनको रेडियसनले ट्युमर हुने खतरा हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? आदि विषयमा धेरै वैज्ञानिक लामो समयदेखि अनुसन्धानमा छन् । तर, अहिलेसम्म यस अनुसन्धानको तथ्यपरक निक्र्योल भने निस्किन सकेको छैन । तर, रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेभ ‘नन आओेनाइजेसन’ रेडिएसन हो, जो एक्स–रे र ‘अल्ट्रावायरल’ रेडियसनको तुलनामा कम तेजिलो हुने गर्छ । एक्सरे र अल्ट्रावायरल रेडियससनले हाम्रो डिएनएमा भएको केमिकल ब्रान्डलाई टुक्र्याउने क्षमता राख्छ । अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले यसखाले रेडियसनले दिमाग, टाउको र घाँटीको ट्युमर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुसन्धान जारी राखेको छ । सोसाइटीका अनुसार मोबाइल फोनबाट निक्लिने रेडियसनमा यति धेरै क्षमता हुँदैन कि जसले हाम्रो डिएनएमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् । त्यसैले अहिलेसम्म मोबाइलको रे
एजेन्सी । हालै बेलायतमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार १५ दिनसम्म अनारको जुस खाने व्यक्तिको यौनच्छा भनेसम्मको हुन्छ । एडिनवर्गराज्यको क्वीन मारग्रेट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले सेक्सपावर बढाउने बिषयमा गरेको अनुसन्धान गरेका थिए । सो क्रममा कमजोर भनिएका केही पुरुष तथा महिलालाई राखी १५ दिन सम्म दिनहु एक गिलास अनारको जुस खुवाएका थिए । १५ दिन खाएको जुसले उनीहरुमा टेस्टोस्टेरोन हार्मेनका स्तर निकै बढ्यो । जव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ्यो , कमजोर ठानिएका पुरुष तथा महिलाहरुले एकाएक उत्कृष्ठ ढंगले यौनव्यवहार देखाउन थाले । विश्वविद्यालयका अनुसार यो अनुसन्धानमा २१ देखी ६४ वर्षका पुरुष र महिलामा गरिएको थियो । टेस्टोस्टेरोन हार्मेनले नै किशोर अवस्थामा पुरुषहरुमा दाह्री जुगा उमार्ने, स्वर परिवर्तन हुने , काखीमुनी रौ उमार्ने, तथा महिलाहरुको स्तनबढाउने काम गर्छ । त्यो संगै सेक्स इच्छा समेत बढाउदै ल
Jun62018 by OnlineBBCNo Comments
यसकारण आउँदैन महिलामा दाह्री…!!!
पुरुष र महिलामा ठ्याक्कै देखिने फरक भनेको दाह्री हो । पुरुषमा दाह्री आउने गर्छ तर महिलामा आउँदैन । महिलाको शरीर निकै सुकिलो हुन्छ । आखिर किन आउँदैन त महिलामा दाह्री ? यस विषयमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ भोला रिजालले नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् : यसकारण आउँदैन जन्मँदै पुरुष र महिलाका ग्रन्थि फरक–फरक हुन्छ । पिट्युटरी ग्लानले सबैमा एकै किसिमले काम गर्छ । उसले जब टार्गेट अग्र्यानमा आफ्नो काम गर्न थाल्छ, त्यसपछि पुरुष र महिलामा फरक–फरक हर्मोन उकास्न थाल्छ । महिलाको ओभरीमा काम गरेर स्ट्रोजेन, प्रोजेस्टोरन हर्मोन उकास्न थाल्छ भने पुरुषमा टेस्टेस्टेरोन हर्मोन उकास्छ । स्टेस्टेरोन पुरुष ग्रन्थिबाट निस्कने हर्मोन हो । महिलामा दाह्री आएमा यदि स्ट्रोजन, प्रोजेस्टोरेन निस्किनुपर्नेमा स्ट्रोजनको केही अंग टेस्टेस्टेरोनमा परिणत भएमा महिलामा पनि पुरुषको जस्तै रौँ आउने समस्या हुन्छ । यस्तो भए
के हो, कहाँ पाइन्छ र किन महत्वपूर्ण छ यार्सागुम्बा?
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा डोल्पामा २४५ केजी, रुकुममा ३५ केजी र बझाङमा ३३८ केजी यार्सागुम्बा संकलन भएको वन विभागको तथ्यांक छ हिमाली भेगका जनताको २५ प्रतिशत आयआर्जनको स्रोतका रुपमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको देखिँदैन। नेपालमा पछिल्लो दुई दशकयता यार्सागुम्बाको व्यावसायिक रुपमा संकलन तथा ओसारपसार हुँदै आए पनि सरकारले यसमा अझै स्पष्ट नीति र कानूनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यार्सागुम्बा हाल हिमाली भेगका झण्डै दुई दर्जन जिल्लाका हजारौँ मानिसको आम्दानीको राम्रो स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यार्सागुम्बा संकलनका समयमा त्यस क्षेत्रका पूरै परिवार नै संकलन कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्। सरकारले हाल यार्सागुम्बामा प्रतिकेजी रु २५ हजार राजश्व लिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा डोल्पामा २४५ केजी, रुकुममा ३५ केजी र बझाङमा ३३८ केजी यार्साग
Jun52018 by OnlineBBCNo Comments
लिपिस्टिक प्रयोगले क्यान्सरको खतरा बढी..
काठमाडौँ। महिलाहरु आफु शुन्दर देखिन लिपिस्टिक प्रयोग गर्ने गर्छन् । तर, महिलाले प्रयोग गर्ने पिपिस्टिक स्वस्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने ज्ञान सवैलाई नहुन सक्छ । अमेरिकाको क्यालीफोर्निया विश्वविद्यालयको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले केही समय पहिला गरेको एक अनुसन्धानले महिलाले प्रयोग गर्ने लिपिस्टिक हानिकारक हुने तथ्य फेला पारेको छ । लामो समयको अनुसन्धान पछि उक्त टोलीले फेला पारेको तथ्य अनुसार लिपिस्टिकमा अल्म्युनियम, क्याडमियम, सिसा (लिड) र अन्य विषालु तत्व अधिक मात्रामा पाइएको हो । बजारमा चलनचल्तीका ३२ प्रकारका लिपिस्टिक र लिप ग्लसको नमुना अनुसन्धान टोलीले परिक्षण गर्दा धेरै जसोमा क्याडमियम, क्रोमियम, अलम्युनियम र कम्तीमा अन्य पाँच धातुको मात्र फेला परेको जानकारी इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ पर्सपेक्टिभ्समा दिइएको छ । यसरी घातक धातु मिश्रित लिपिस्टिकलाई केही मात्रामा प्रयोग गर्ने महिलाम